မြ၀တီတိုက်ပွဲလက်ရှိအခြေအနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြ၀တီတိုက်ပွဲလက်ရှိအခြေအနေ
Posted by cherrywine on Nov 12, 2010 in Myanma News, News |7comments
နယူးယောက်မှ ရရှိတဲ့ သတင်းအရ မြန်မာ သူပုန်အဖွဲ့ခြောက်ဖွဲ့ဟာ ယာယီညွန့်ပေါင်းအဖြစ် မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)၊ လွတ်လပ်တဲ့ ကချင်တပ်မတော်(KIA)၊ ကရင်နီတပ် (KNPP)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ရှမ်းတပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း (SSA-N) တို့မှ နအဖ စစ်အစိုးရအား တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ အင်သား သုံးသောင်းကျော်ဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်မည်။(ကိုးကား – AFP)
ယမန်နေ့ညနေ ၅ နာရီလောက်က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတပ်မတော် တပ်မဟာ၁ အဖွဲ့နဲ့ နအဖ တပ်မ ၃၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၂၄ တို့ တဖက်နဲ့ တိုက်ပွဲများပွားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲက ကြို့ကြားကြို့ကြား ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲ တဖက်နဲ့တဖက် အင်အား ၇၀၊ ၈၀ လောက်နဲ့ အပြင်းအထန်နေတုန်းလို့ ဆိုပါတယ်။ SSA မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော် အင်အား ၃၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိတယ်လို့ သိရှိရသည်။(ကိုးကား – ဗွီအိုအေ)
ဒီကေဘီအေမှ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့များလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တံဆိပ်များ ဖြုတ်ပြီး ဒီကေဘီအေ အသွင်ပြန်ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Myanmar rebel groups form new alliance
NEW YORK: Six Myanmar ethnic rebel groups have formedacoalition to step up hostilities with the country’s junta,arepresentative for an activist group said.
Three of the groups had previously signed ceasefire accords with the junta, which faces renewed international criticism over the country’s November7national election.
He warned that hostilities would increasingly be moved to urban areas. “The war will no longer be restricted to the jungle.”
In border areas where civil war continues, rights groups have accused the junta of wagingabrutal counter-insurgency campaign involving the rape, torture and murder of villagers whose homes are routinely destroyed. – AFP/fa
“ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး နှင့် အဖွဲ့ ဝေါလေကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နအဖ စစ်တပ် အတုံးအရုံး သေဖွယ်ရှိ“
တဲ့….. http://www.freedomnewsgroup.com မှာ ဖော်ပြထားတယ်…
အေးမင်း ပြောတာ မှန်လောက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ စစ်တိုက်နေတဲ့ စစ်သားဟာ စစ်တစ်ပွဲတိုက်မယ် ဆိုရင်
ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိ့ပီးသား ဘာ မှ မသိတဲ့ အရပ် သား တစ်ယောက်ကသာ နုတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်
အင်းအားက ၃၀၀၀၀ ကျော်ဆိုတော့ တော်တော်လေးများတာပဲ ။ဒါဆို ဘာပဲ ဖြစ် ဖြစ် ချကွာ ။သူသေ ကို သေ ပေါ့ …………………….
http://www.freedomnewsgroup.com သတင်းမှာ အတိုစာတမ်း သာ ဖတ်လို့ရနေပါတယ်။
သူတို့တွေ ချတာအရေးမကြီးးဘူးဟ…..ငါတို့တွေက ထမင်းငတ်နေအုံးမယ် ……
အမင်းတော့ အငတ်ခံနိုင်ဘူးနော် …..ချရင်ချ ကြ……